Orexin သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချာသောကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူစတင်ခြင်းကိုဖျန်ဖြေပေးသော်လည်းလိင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အရေးပါသည် (2011) - Your Brain On Porn
Horm ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2011 သြဂုတ် 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Horm ပြုမူနေ။ 2010 သြဂုတ်; 58 (3): 397-404 ။
2010 ဇွန် 10 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2010.06.004
Andrea R. Di Sebastiano,1 Sabrina Yong-Yow,2 Lauren Wagner,3 မိုက်ကယ် N. Lehman,1 နှင့် Lique အမ် Coolen1,2
အဆိုပါ hypothalamic neuropeptide orexin arousal, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအပါအဝင်သဘာဝကြိုးအပြုအမူတွေ, mediates ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤသဘာဝကြိုးအပြုအမူအတွက် orexin-တစ်ဦးကတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, orexin အဲဒီ receptor-1 agonists သို့မဟုတ်ရန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ သို့သျောလညျးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်အတွက် endogenous orexin-တစ်ဦးသို့မဟုတ် B က၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍသည်လက်ရှိအချိန်တွင်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုများ orexin အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အရေးပါသောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့အာရုံကြော activation နှင့် orexin ဆဲလ်-တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်များအတွက်အမှတ်အသားများအသုံးပြုသွားမည်။ ပထမဦးစွာ orexin အာရုံခံအတွက် cFos စကားရပ်မိတ်လိုက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များကထပ်မံ activation မရှိဘဲလက်ခံသို့မဟုတ် Non-လက်ခံအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုသည်အောက်ပါသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယင်းနောက် orexin ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ hypothalamus အတွက် orexin ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်ရရှိလာတဲ့, orexin-B က conjugation saporin အသုံးချဖို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလေးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ယောက်ျားလိင်ရင်တော့မှားမယ်, ဒါပေမယ့်မရအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင် facilitated ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အကြံပြုခြင်း, ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘဲနောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်း mount နှင့် intromit ဖို့ကိုတိုစေ latency ပြသခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာတွေ့ရှိရပါသည်လေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှုကဆုံးဖြတ်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်မှုရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အမျိုးသမီးမှကနဦးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်အတွက် orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ supporting, lesioned ယောက်ျားအတွက်လျှော့စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက် orexin အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါသည်မဟုတ်, ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သော arousal နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါကိုပြ။
keywords: orexin, hypocretin, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, သုတ်ရည်ထိ, အာရုံကြော activation, လှုံ့ဆျောမှု, hypothalamus, အသစ်အဆန်း, arousal, စိုးရိမ်ပူပန်
ထို့အပြင် hypocretin အဖြစ်လူသိများ Orexin, (အပြုအမူအစာကျွေးမှုအတွက်အရေးပါတစ် hypothalamic neuropeptide ဖြစ်ပါသည်က de Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al; 1998, Sakurai, 2006; Benoit et al ။ , 2008) arousal နှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း (Chemelli et al ။ , 1999; Lin က et al ။ , 1999, Sakurai, 2007; ဖာလုံနှင့် Carrive, 2007; ဖာလုံ et al ။ , 2009; Carter က et al ။ , 2009) ။ Orexin အာရုံခံ (ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ (LHA) နှင့် perifornical dorsomedial hypothalamus (PFA-ဇလဌာန) မှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနှစ်ယောက် neuropeptides, orexin-A နှင့် B ထုတ်လုပ်နေကြက de Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998) ။ Orexin အာရုံခံ (ဦးနှောက်ဟာ locus coeruleus အပါအဝင် arousal ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဆောက်အဦများ, tuberomammillary နျူကလိယနှင့် peduculopontine tegmental နျူကလိယမှပရောဂျက်ပြခဲ့ကြPeyron et al ။ , 1998; Hagan et al ။ , 1999; Horvath et al ။ , 1999; Baldo et al ။ , 2003) ။ Orexin လည်း (အထူးသအလွဲသုံးစားမှုအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သော, ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးAston-ဂျုံးစ် et al ။ , 2009a; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ , 2009b) နှင့် orexin အာရုံခံ (အ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင် mesolimbic စနစ်နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဆုချမှပရောဂျက်ပြခဲ့ကြPeyron et al ။ , 1998; Fadel နှင့် Deutch, 2002; မာတင် et al ။ , 2002; Baldo et al ။ , 2003) ။ Orexin အာရုံခံအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ် conditional Contextual တွေကို (ဖွငျ့ activated နေကြတယ်Harris က et al ။ , 2005; က de Lecea et al ။ , 2006; Choi et al ။ , 2010) နှင့်ဆုလာဘ်-based နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသခဲ့ကြ (Choi et al ။ , 2010) ။ တစ်ဦး orexin အဲဒီ receptor 1 (ORX1) အရေးပါတယ်လို့များစားစရာဘို့လျှော့လှုံ့ဆျောမှုအတွက်ရန်ရလဒ်များကို (၏ထိုမှတပါး, intracerebroventricular (ICV) သို့မဟုတ် intraperitoneal အုပ်ချုပ်ရေးThorpe et al ။ , 2005; Nair et al ။ , 2008), ICV orexin-တစ်ဦးကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဒီလှုံ့ဆျောမှုပြန်လည်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း (Boutrel et al ။ , 2005).
အတော်ကြာလေ့လာမှုများအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အတွက် orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြပေမယ့်အခြားအကြိုးအပြုအမူတွေအတွက် orexin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယခင်က (orexin အာရုံခံအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိများက activated ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးet al Muschamp ။ , 2007) ။ ထို့အပြင် medial preoptic ဧရိယာ (mPOA) သို့ orexin-တစ်ဦး၏အုပ်ချုပ်မှု (mount နှင့် intromit မှလျှော့ latency ခြင်းဖြင့်သက်သေတိုးမြှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရလဒ်နှင့်တောင်ပေါ်နှင့် intromission ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးလာGulia et al ။ , 2003) ။ ဆနျ့ကငျြ, orexin-တစ်ဦးက attenuation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ICV အုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးသမီး preference ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သာအတွက်အလွန်အမင်းလိင် (ယောက်ျားလှုံ့ဆော်ပေမယ့်Bai et al ။ , 2009) ။ ORX1 ရန်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုအနည်းငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြား parameters များကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ intromit မှတိုးပွားလာအောင်းနေချိန်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းအဖြစ် ORX1 ရန်ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကိုလည်း (ဆနျ့ကငျြဒေတာသရုပ်ပြပါပြီet al Muschamp ။ , 2007), ORX1 ရန်၏ ICV အုပ်ချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့စဉ် (Bai et al ။ , 2009) ။ အတူတူကဤလေ့လာမှုများ exogenous orexin-တစ်ဦး၏အုပ်ချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိခိုက်စေသောအကြံပြု; သို့သော် endogenous orexin (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှမပြုစေခြင်းငှါBai et al ။ , 2009) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက် endogenous orexin အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ orexin အာရုံခံစဉ်အတွင်း orexin အာရုံခံသည့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏နိဒါန်းအပေါ်သို့ activated သောအယူအဆစမ်းသပ် activated အခါပထမဦးစွာပြုလုပ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျက (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်အဖြစ်Dewsbury, 1969) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ (Tenk et al ။ , 2009), ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း orexin အာရုံခံဆဲလျ activation သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့က orexin orexin အာရုံခံ၏ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည် အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (200-250g) Plexiglas လှောင်အိမ်ထဲမှာ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) Harlan (Indianapolis, IN) သို့မဟုတ်ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Sherbrooke မှာ Quebec, ကနေဒါ) မှရရှိသောနှင့်တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ, တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုအပေါ် မူတည်. အားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်းတစ် 12 / 12 အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်အလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာ (10 pm မှာချွတ်ထွန်း) နှင့်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ရေပြောင်းပြန် ကြော်ငြာ libitum အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. ။ အမျိုးသမီး Sprague-Dawley ကြွက် Harlan (Indianapolis, IN) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Sherbrooke မှာ Quebec, ကနေဒါ) မြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized တို့ 5% 17-β-estradiol benzoate silastic တောင့နှင့်အတူအရေပြားအောက်ဆုံးကိုထညျ့သှငျး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ကြိုတင်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမှအဓိကချို့ယွင်း၏အရေပြားအောက်ဆုံးထိုး (နှမ်းဆီ 500ml အတွက် 0.1 μg) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4ဇအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်နှင့်အနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်မှာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီများကအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ကနေဒါကောင်စီကဖျောပွထားသညျ့လမျးညှနျမှညီခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ပြုလာသောအခါ မှလွဲ. မှိန်အနီရောင် illumination အောက်မှာအမှောင်အဆင့်၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။
အထီးကြွက် (ဎ = 48) တစ်ဦးချင်းသျောနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ထက်ဝက်5နှစ်ကြိမ်အပတ်စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေကြိုတင်မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ် Conditions တွေကို (ရန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်နှင့်ထိတွေ့မှုမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် arousal နှင့် cFos စကားရပ်ပပျောက်ဖို့အိမ်ကလှောင်အိမ်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြBalfour et al ။ , 2004) ။ တစ်ဦးကလက်ခံအမျိုးသမီးအိမ်လှောင်အိမ်သို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိသို့မဟုတ် 60 မိနစ်မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အဖြစ် latency ပထမဦးဆုံး mount နှင့် intromission (ပထမတောင်ပေါ်မှာဖို့လက်ခံအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုသို့မဟုတ် intromission ကနေအချိန်) ငှါ၎င်း, သုတ်ရည်လွှတ် (သုတ်ရည်လွှတ်မှပထမဦးဆုံး intromission ကနေအချိန်), မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် (Agmo, 1997) ။ တိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်ရှိနေသောတစ်ဝက်လိင်ရင်တော့မှားမယ်နျြရစျ။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားကဲ့သို့တူညီသောအခန်းတစ်ခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်, သို့သော်မိတ်မကိုင်တွယ်နှင့်ထိတွေ့အနံ့ရန်နှင့်မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်အသံခဲ့ကြသည်။ ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များအသီးအသီးနောက်ထပ်6စမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြား (အုပ်စုတစ်စုနှုန်းဎ = 4) တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ6ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများပါဝင်သည်: ထိန်းချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှမထိတွေ့ (မူလစာမျက်နှာကေ့) နဲ့ကူထီး; 15 မိနစ် (Anestrous အမျိုးသမီး) အတွက်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ non-လက်ခံအမျိုးသမီးထိတွေ့ယောက်ျား။ အထီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အပြန်အလှန်သို့သော်ကြောင့်အမျိုးသမီး Reception မရှိခြင်းမှမိတ်မပြုခဲ့နိုငျဘဲ, 15 မိနစ် (Estrous အမျိုးသမီး) အတွက်အိမ်လှောင်အိမ်၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ်ဝါယာကြိုးကွက် box ထဲမှာနေရာချတဲ့လက်ခံအမျိုးသမီး၏အနံ့ထိတွေ့အထီး; တောင်ပေါ်ပြသကြောင်းအထီး, ဒါပေမယ့်မရ intromissions သို့မဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်အမျိုးသမီး (တောင်ပေါ်က) ​​နဲ့သုတ်ရည်လွှတ်; တောင်ပေါ်နှင့် intromissions သာ (Intromission) ပြသကြောင်းအထီး; တသုတ်ရည်လွှတ် (သုတ်ရည်လွှတ်) အား mated ကြောင့်ယောက်ျား။ တစ်နာရီစမ်းသပ်မှု၏အဆုံးပြီးနောက်, ယောက်ျား cFos စကားရပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parameters တွေကိုအပေါ်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်နှင့်အမီအပြီးသတ်စမ်းသပ်ဖို့အုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။ ထိုမှတပါး, တောင်ပေါ်ပေါင်း intromissions ၏နံပါတ်များအတွက်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ကာလအတွင်းရှိခဲ့သည်။
Perfusions: cFos စကားရပ်
အားလုံးယောက်ျားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုဒီယမ် pentobarbitol (270 မီလီဂရမ် / mL) နဲ့ anesthetised ခဲ့ကြသည်နှင့်အ 4% paraformaldehyde (500 mL; PFA) နဲ့ transcardially-perfused ခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါ perfusion ဦးနှောက်ထို့နောက် cryoprotection ဘို့% sucrose ဖြေရှင်းချက် 20 လွှဲပြောင်းအတူတူ fixative အတွက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တစ်နာရီများအတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် (35 M က PB အတွက် 4% sucrose 30% Ethylene glycol နှင့် 0.1% ဆိုဒီယမ် azide ်) နှင့်သိုလှောင်ထား 30 μm၏ Coronal ကဏ္ဍများအတွက်အေးခဲနေသော microtome (Microm, Walldorf, ဂျာမနီ) ရက်နေ့တွင် sectioned နှင့် cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ 0.01 အပြိုင်ကဏ္ဍများအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြ -20 မှာနောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့သည်အထိကို C °။
အားလုံးပေါက်ဖွားနူးညံ့သိမ်မွေ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအခန်းအပူချိန်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အခမဲ့ floating ကဏ္ဍများ 0.1M ဆား buffered ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ် (PBS) နဲ့ကျယ်ပြန့်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ 1% H ကိုအတူပိတ်ဆို့ခဲ့သည်2O2 30 မိနစ် PBS အတွက် (10% စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်), ထို့နောက်ကျယ်ကျယ် PBS နှင့်အတူနောက်တဖန်နှင့်ဆေး။ ကဏ္ဍများ 0.1 တစ်နာရီ (PBS 0.4% bovine သွေးရည်ကြည် albumin နှင့် 100% ထရီ X-1 ်) တစ်ခုပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ မူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားနေ့ချင်းညချင်းအခန်းအပူချိန်မှာထိုပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါအစွန်းအထင်းကဏ္ဍများကို PBS နှင့်ဆေးခဲ့ပေါင်းစွဲချက်တင်ဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် dibutyl Phthalate xylene (DPX) နဲ့ coverslipped ။
ပုဒ်မတစ်ခုမှာစီးရီး cFos နှင့် orexin များအတွက် immunoprocessed ခဲ့သည်။ 52: biotinylated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် (1 နှင့်အတူ 10 နာရီပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်:; (000 1, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA 1 ယုန် Anti-cFos, SC-500) ကဏ္ဍများ cFos အသိအမှတ်ပြု antibody ကိုကြီးပြင်းနေတဲ့ယုန်နှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် , Vector Laboratories, Burlingame,, CA) နှင့်တစ်ဦး avidin horseradish peroxidase ရှုပ်ထွေးသော (1: 1000, ABC ရုပ်သံကိရိယာအစုံ, Vector Laboratories, Burlingame,, CA) ။ ကဏ္ဍများအပြာရောင်-အနက်ရောင်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, 10% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် 0.02% နီကယ် sulfate်0.1M ဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB) တွင် 0.012% diaminobenzidine (DAB) (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) တွင် 0.08 မိနစ်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများထို့နောက်ယုန်နှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် orexin-တစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြု antibody ကိုကြီးပြင်း (ယုန် Anti-orexin-A, H-003-30; 1: 20 000, Phoenix မြို့ဆေးဝါး, Burlingame,, CA) biotinylated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်အတူ 1 နာရီပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, -rabbit နှင့် ABC ရုပ်သံ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဏ္ဍ 10M PB အတွက် 0.02% DAB တစ်ဦးအနီအညိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, 0.1% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်များနှင့်အတူ 0.012 မိနစ်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။
အားလုံးပဋိ (ယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာပြီချန် et al ။ , 1999; Satoh et al ။ , 2004; ရှောလမုန်သည် et al ။ , 2007) ။ Immunohistochemical ထိန်းချုပ်မှုမူလတန်းပဋိ၏ပျက်ကွက်, သင့်လျော်သောအလေးချိန် (cFos) မှာတစ်ခုတည်းခညျြအနှောသရုပ်ပြအနောက်ပိုင်းချေ analysis နှင့် orexin B-saporin ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (orexin) နဲ့ immunohistochemical orexin signal ကိုဆုံးရှုံးပါဝင်သည်။
orexin သို့မဟုတ် orexin နှင့် cFos အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်အာရုံခံအဆိုပါ orexin အာရုံခံလူဦးရေရဲ့အကျယ်ချဲ့ဂဏန်းများသိတိရိစ္ဆာန်နှုန်းသုံးခုကိုယ်စားလှယ်အပိုင်း (နှစ်နိုင်ငံရေတွက်ခဲ့သည်Sakurai et al ။ , 1998) (bregma ထံမှမီလီမီတာ -2.3 မှ -3.6 မီလီမီတာ spanningPaxinos နှင့် Watson, 1998()ပုံ 1), (Leica Microsystems ကိုတစ်ဦး Leica ဏုတွဲနေတဲ့ပုံဆွဲပြွန်ကို အသုံးပြု. ; အနေနဲ့လေ့လာတွေ့ရှိစမ်းသပ်အုပ်စုများမှမြင်နိုင်အသုံးပြုပုံ Wetzlar ဂျာမဏီ) ။ အဆိုပါ PFA-ဇလဌာနနှင့် LHA (ထို fornix ၏တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီး delineated ခဲ့ကြသည်ပုံ 1a) ။ cFos ဖော်ပြ orexin အာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် hemisphere နှုန်းပျမ်းမျှတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်အဘို့နှင့်အုပ်စုတစ်စုနည်းလမ်းများတွက်ချက်ကြ၏။ အုပ်စုများအကြားစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုတစ်ဦး 95% ယုံကြည်မှု Level ဖြင့် Fisher ကရဲ့ LSD စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အချက်များအဖြစ်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့ Two-လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံ၏တည်နေရာ။ (A) ကို hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံ၏ Anatomical တည်နေရာ။ (Paxinos နှင့် Watson, 1998), စကေးဘား: 200 μm။ (ခ) လူပျိုတစ်ဦး unmated ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်အတွက် PFA-ဇလဌာနအတွက် orexin အာရုံခံကပ်ထားပါတယ်။ (ဂ) Orexin ...
ယောက်ျားတစ်ဦးချင်းသျောနှင့်ကြိုတင်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတုအယောင်ခွဲစိတ်ဖို့လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်တသားတ Pre-စမ်းသပ်မိတ်လိုက် session တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့နှင့်အုပ်စုများမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ parameters တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အထီးကြွက်တစ်ဦး Surgivet Isotec4 ဓာတ်ငွေ့ယန္တရား (Smith ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ VET ဌာနခွဲ, Markham, အွန်, ကနေဒါ) ကိုသုံးပြီး isoflurane (ဆရာတော်ကြီး Laboratories, စိန့် Laurent မှာ Quebec, ကနေဒါ) နဲ့ anesthetized နှင့် stereotaxic ယန္တရား (Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA) တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည် ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံးမေ့ဆေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ဖုံးအုပ်နှင့်အတူ။ တစ်ခုကခွဲစိတ်တွေ့အဆင့်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဦးခေါင်းခွံနှင့် lambda နှင့် bregma ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပေါက်ဟာတစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားအဆိပ်အတောက် orexin-B က saporin (အိုင်တီ-40, အဆင့်မြင့်နှငျ့ပွညျ့စုံတစ် dremel လေ့ကျင့်ခန်း (Dremel, Racine, WI) နှင့်ဖန် micropipettes (20μmအချင်း, ကမ္ဘာ့ Precision တူရိယာ Inc မှ, Sarasota, FL) သုံးပြီးဦးခေါင်းခွံထဲမှာတူးခဲ့သည် စနစ်များ, San Diego မှ,, CA ပစ်မှတ်ထား; PBS အတွက် 200ng / μL); သို့မဟုတ် unconjugated အဆိပ်အတောက် blank-saporin (စနစ်များ Targeting အိုင်တီ-21, အဆင့်မြင့်, San Diego မှ,, CA; PBS အတွက် 200ng / μL; အတုအယောင်ထိန်းချုပ်မှု) ကို hypothalamus သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုပစ်မှတ်ထားအဆိပ်အတောက် (ORX2 ဖော်ပြဆဲလ်များအတွက် orexin အဲဒီ receptor2(ORX1) ဖော်ပြဆဲလ်တစ်ဦးမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်တစ်ဦးသိသိသာသာနိမ့်ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူခညျြနှောငျမှပြသထားသည်Gerashchenko et al ။ , 2001), နှင့် (အထူးသ hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံ ablate ပြထားပြီးဖရက်ဒရစ်-Duus et al ။ , 2007) ။ 1 μL (hemisphere နှုန်း 2) ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာအောက်ပါသြဒီနိတ်မှာထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်: AP = -2.8 နှင့် -3.2; ML = 0.7 နှင့် 0.8; DV = -9.0 (Paxinos နှင့် Watson, 1998) ။ အသီးအသီးပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ဆေးထိုးအပ်ပျံ့နှံ့ခွင့်ပြု3မိနစ်ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နှင့်အနာဒဏ်ရာကလစ်များနှင့်အတူအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်အောက်ပါနှစ်ပတ်အပေါင်းတို့, အထီးလေးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်အုပ်စုတစ်စုနှုန်းတိရစ္ဆာန်များ၏လုံလောက်သောနံပါတ်များကိုရောက်ရှိဖို့, ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာနေဖြင့်ရွေးချယ်ခွဲ ထား. သုံးကွဲပြားခြားနားအလိုက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အားလုံးယောက်ျားအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိသမျှဒုတိယနေ့ကောက်ယူ4မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, အထီးပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆိုတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် 60 မိနစ်များအတွက်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ mated ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုလည်းတွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်မိတ်လိုက်အပြုအမူ [intromissions / (တောင်ပေါ် + intromissions ၏နံပါတ်များနံပါတ်များ) ၏နံပါတ်များ] မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကိုအတွက်စာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုတစ် 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်နှင့်အတူတစ်အချက်နှင့် Fisher ရဲ့ LSD စမ်းသပ်မှုအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်အတူတလမ်းတည်းဖြင့် ANOVA သုံးပြီးတစ်ခုချင်းစီစမ်းဘို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတုအယောင်အဖွဲ့များအကြားနှိုင်းယှဉ်, ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာသင့်လျော်သောခဲ့ကြသည်, Non-parametric စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး run ခဲ့ကြသည် တစ်ဦး Kruskal-Wallis ဟာတလမ်း ANOVA တစ် 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်နှင့်အတူတစ်အချက်နှင့် Dunn ရဲ့စမ်းသပ်မှုအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်အတူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အုပ်စုတိုင်းအတွက်ဒေတာတွဲ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး Pre-ခွဲစိတ် data တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation: လေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်ခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ပြီးနောက်ယခုလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားတစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲတစ်ဖြောင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းယန္တရား (Med Associates မှ Inc ကို, စိန့် Albans, VT) ကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် (120 စင်တီမီတာရှည်လျား; လိုပက်ဇ် et al ။ , 1999) ။ ထိုနေ့ရက်တွင်ကောက်ယူနှစ်ခုနောက်ဆက်တွဲ 10 မိနစ်စမ်းသပ်မှုတွေကျော်လေယာဉ်ပြေးလမ်းယန္တရားမှ habituated ယောက်ျား။ ထို့နောက်နှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စဉ်အတွင်းတစ်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန် (estrous အမျိုးသမီး, anestrous အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီး) ကလေယာဉ်ပြေးလမ်းရဲ့အဆုံးမှာဖောက်ထား Divide အတူရည်မှန်းချက် box ထဲမှာနေရာချပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပန်ကာယောက်ျားဆီသို့နှိုးဆွတိရိစ္ဆာန်များ၏ရနံ့မှုတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်အထီးစတင် box ထဲမှာထားကြ၏, ထိုတံခါးကိုလေယာဉ်ပြေးလမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုပါရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်, ထိုရည်မှန်းချက် box ကိုရောက်ရှိရန်အချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပန်းတိုင် box ကိုရောက်ရှိ, အထီးမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်ဆံရန် 30 စက္ကန့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးတူညီဒုတိယရုံးတင်စစ်ဆေးအကြာတွင် 1 နာရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ရုံးတင်စစ်ဆေး 1 နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေး2အကြားရည်မှန်းချက် box ကိုရောက်ရှိဖို့ကြိမ်အကြားစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုတစ်ဦး 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုအတူတွဲ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုများအကြားစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုတစ်ဦး 95% ယုံကြည်မှု Level ဖြင့် Fisher ကရဲ့ LSD စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်ခွဲစိတ်နှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ: ဓာတ်လှေကား Plus အားဝင်္
ယခုလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားတစ်အဖွဲ့ခွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစိုးရိမ်သောကသို့မဟုတ် arousal ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အလင်းကိုအဆင့်၏အဆုံးနေစဉ်အတွင်းတစ်တောက်တောက် lit ခန်းထဲမှာ; အထီးမြင့်မားသောပေါင်းဝင်္ယန္တရား (Med Associates မှ Inc ကို, စိန့် Albans, VT EPM) ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ EPM ဗဟိုလမ်းဆုံကနေတိုးချဲ့အရှည်4လက်နက်တစ်ခုချင်းစီ 50 စင်တီမီတာပါဝင်သည်နှင့်မြင့်မားသော 75 စင်တီမီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝင်္နှစျယောကျလက်နက်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှပွင့်လင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုမှောင်မိုက်တွင်မှ 40 စင်တီမီတာမြင့်သောနဲ့အတူပူးတွဲခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် EPM အပေါ်ထားရှိငါးမိနစ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အချိန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ထားသောလက်နက်အတွက်သုံးစွဲခြင်း, အသီးအသီးလက်မောင်းသို့ entries တွေကိုစုစုပေါင်းဂဏန်း photobeam Array ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုများအကြားစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုတစ်ဦး 95% ယုံကြည်မှု Level ဖြင့် Fisher ကရဲ့ LSD စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
Perfusions နှင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos
အားလုံးအမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်အားလုံးယောက်ျားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုဒီယမ် pentobarbitol (270mg / mL) နဲ့ anesthetised ခဲ့ကြသည်များနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ transcardially ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စိစစ်အတည်ပြုဘို့ 500% PFA ၏4mL နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်အပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့, အတုအယောင်နဲ့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ယောက်ျား၏အုပ်စုများတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိ mated ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့သုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါတစ်ခုမှာနာရီ, အထီး transcardially 4% PFA နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာယောက်ျား၏ထက်ဝက်အမျိုးသမီးမှမိတ်ဆက်မပေးခဲ့ကြခြင်းနှင့် unmated ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အစေခံရန်အိမ်လှောင်အိမ်ကနေ perfused ခဲ့ကြသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဦးနှောက်4μm Coronal အပိုင်း 35 အပြိုင်စီးရီးထဲမှာခဲ microtome သုံးပြီး sectioned နှင့်သိုလှောင်ထားခဲ့ကြသည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စိစစ်အတည်ပြုဘို့, ရှိသမျှကိုတွေ့ရှိရပါသည်စမ်းသပ်ချက်ကနေ hypothalamus ်ကဏ္ဍများတဦးစီးရီးအတူတူယုန် Anti-orexin-A နှင့် DAB protocol ကို အသုံးပြု. orexin ဘို့တစ်ခုတည်းတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ mated သောတိရိစ္ဆာန်များကနေအပိုင်းတစ်ခုမှာစီးရီး cFos နှင့် orexin များအတွက်စွန်းခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ခုနှစ်, orexin များအတွက် immunoreactive orexin အာရုံခံ၏နံပါတ်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ bregma ထံမှမီလီမီတာ -3 မှ Non-ခွဲစိတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် orexin ဆဲလ်၏အလုပျသနံပါတ်များကိုဖော်ပြ 2.3 ကဏ္ဍများ, -3.6 မီလီမီတာအတွက် PFA-ဇလဌာနနှင့် LHA နှစ်နိုင်ငံရေတွက်ခဲ့သည်။ hemisphere နှုန်းဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျမ်းမျှ ဖြစ်. , အုပ်စုတစ်စုနည်းလမ်းများတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ non-ခွဲစိတ်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (cFos စမ်းသပ်ချက်ထံမှ) orexin အာရုံခံခြင်းနှင့်အချက်အလက်များ၏နဂိုအတိုင်း / အခြေခံနံပါတ်များကို non-ခွဲစိတ်ထိန်းချုပ်မှုအထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (ပုံ 2) ။ Non-ခွဲစိတ်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 20% orexin ဆဲလ်ထက်နည်းပါးလာခဲ့ကြောင်းအထီးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ 20% ထက် သာ. ကြီးမြတ်, ဒါပေမယ့် 80% ထက်နည်းပါးလာနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ အတုအယောင်ထိန်းချုပ်မှု orexin ဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အတုအယောင်တို့အကြားစာရင်းအင်းအရေးပါမှု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ပြည့်စုံကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိရိစ္ဆာန်များတစ် 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုအတူတစ်လမ်း ANOVA နှင့် Fisher ရဲ့ LSD စမ်းသပ် အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စိစစ်အတည်ပြု။ Blank-saporin နှင့်အတူထိုးသွင်းနေတဲ့အတုအယောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိရိစ္ဆာန်အတွက် orexin (က) နှင့် MCH (ခ) ဆဲလ်များကိုဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။ orexin နှင့်အတူထိုးသွင်းနေတဲ့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိရိစ္ဆာန်အတွက် orexin ဆဲလ်တွေ (C) ၏ဆုံးရှုံးမှု, ဒါပေမယ့်နဂိုအတိုင်း MCH ဆဲလ် (ဃ) ဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ ...
ကိုတွေ့ရှိရပါသည် orexin အာရုံခံမှကန့်သတ်ခဲ့အတည်ပြုရန်, တဦးတည်းအတုအယောင်များနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်တိရစ္ဆာန်များ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ကနေ hypothalamus ်အပိုင်းစီးရီး (ဎ = 20) melanocyte အာရုံဟော်မုန်း (MCH), တည်နေရာထပ် (သို့သော်အဘယ်သူမျှမမူကြောင်းကိုတစ်ဦး hypothalamic peptide များအတွက် immunoprocessed ခဲ့သည် orexin အာရုံခံနှင့်အတူ colocalization) (Broberger et al ။ , 1998), MCH (ယုန် Anti-MCH, H-070-47 အသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ယုန်-ကြီးပြင်း antibody ကို အသုံးပြု. ; 1: ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 150 000, Phoenix မြို့ဆေးဝါး, Burlingame,, CA) နှင့် DAB ။ MCH အာရုံခံ (ORX1 ဖော်ပြBäckberg et al ။ , 2002) သော်လည်းမ ORX2 (Volgin et al ။ , 2004), နှင့်သိသိသာသာ orexin B-saporin ကုသမှုအောက်ပါလျှော့ချကြသည်မဟုတ် (ဖရက်ဒရစ်-Duus et al ။ , 2007) ။ orexin အာရုံခံအဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့အားအခြားကဏ္ဍများကိုသုံးပြီး; MCH immunoreactive ဆဲလ်တိရိစ္ဆာန်နှုန်းနှစ်ခုအပိုင်း (တွေ့ရှိရပါသည်ဎ =7ဎ =5အတုအယောင်) နှစ်နိုင်ငံရေတွက်ခဲ့သည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သိသိသာသာ (PFA-ဇလဌာနသို့မဟုတ် LHA ဖြစ်စေများတွင် MCH အာရုံခံ၏နံပါတ်များကိုလျှော့ချမပြုခဲ့စားပွဲတင် 1; ပုံ 2b, ဃ; PFA-ဇလဌာန: p = 0.47; LHA: p = 0.33) ။ orexin အာရုံခံအဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့အားအခြားကဏ္ဍများကိုသုံးပြီး; ထို့အပြင်အဖော်ရှာသွေးဆောင် cFos စကားရပ်တိရိစ္ဆာန်နှုန်းတဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အပိုင်း (တွေ့ရှိရပါသည်ဎ =4ဎ =3အတုအယောင်) နှစ်နိုင်ငံရေတွက်ခဲ့သည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ခြင်း (PFA-ဇလဌာနသို့မဟုတ် LHA အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်မထိခိုက်ခဲ့ပါစားပွဲတင် 1; PFA-ဇလဌာန: p = 0.53; LHA: p = 0.82) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ orexin ဆဲလ်အရေအတွက် (တိရိစ္ဆာန်များ: အတုအယောင်: ဎ = 6; တွေ့ရှိရပါသည်: ဎ = 6) အတွက်အသုံးပြုကိုယ်စားလှယ်ကဏ္ဍများ Nissl cresyl ခရမ်းရောင် (5 ဆ cresyl ခရမ်းရောင် acetate (ကို C-5042, Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို), ကို အသုံးပြု. counterstained ခဲ့ကြသည် 0.5): ဆိုဒီယမ် acetate trihydrate သော pH မှာ glacial acetic acid ကို (AX209-1, EMD ဓာတုပစ္စည်း, Mississauga, အွန်, ကနေဒါ) နဲ့ (S0073, Thermo Fisher ကသိပ္ပံ, Ottawa, အွန်, ကနေဒါ), 6L နှစ်ဆရေစက်ရေ 3.14 ဂရမ်။ Nissl စွန်းတွင် neuron များ၏အရေအတွက် orexin အာရုံခံ၏အထွေထွေတည်နေရာအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (250 μm× 200 μm) ၏စံဒေသများရှိဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Nissl-စွန်းတွင် neuron များ၏နံပါတ်များကို (အတုအယောင်များနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားဘူးစားပွဲတင် 1; PFA-ဇလဌာန: p = 0.23; LHA: p = 0.33) ။
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိကျတဲ့၏ verification: Nissl များအတွက်စွန်းတွင် neuron များ၏နံပါတ်များကိုလေ့လာခြင်း, MCH သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်သွေးဆောင် cFos ယေဘုယျ, MCH ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်၏အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုရှိကွောငျးကိုသရုပ်ပြဒါမှမဟုတ် PFA-ဇလဌာနများတွင်သွေးဆောင်အာရုံကြော activation အဖော်ရှာသို့မဟုတ် ...
orexin တစ်ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ narcolepsy အထောက်အကူပြုဖို့ပြပွဲ (ခဲ့ပြီးကတည်းကChemelli et al ။ , 1999), ခွေး (Lin က et al ။ , 1999) နှင့်လူသားမြားသညျ (Siegel, 1999; Nishino et al ။ , 2000; Peyron et al ။ , 2000; Thannickal et al ။ , 2000) တိရိစ္ဆာန်များတစ် narcoleptic phenotype ၏မရှိခြင်းသေချာစေရန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံအားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်အဘို့ရှုလေ့လာခဲ့ကြခြင်းနှင့် narcolepsy မဆိုဝိသေသလက္ခဏာများမပြခဲ့ပါဘူး။
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်
mPOA (3 × 900 μm), ဆဲလ် ventral tegmental ဧရိယာ (900 × 400 μm VTA) တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများရှိတိရစ္ဆာန်များနှုန်း 600 ကဏ္ဍများကိုနှစ်နိုင်ငံရေတွက်ခဲ့ကြ cFos-immunoreactive ၏နံပါတ်များ, နျူကလိယ accumbens (NAc) core နဲ့ shell ကို (400 × 600 μm) နှင့်တစ်ဦးလေ့လာတွေ့ရှိစမ်းသပ်အုပ်စုများမှမြင်နိုင်အားဖြင့် medial prefrontal cortex (mPFC) (Sub-ဒေသနှုန်း 600 × 800 μm) ၏ prelimbic, infralimbic နှင့် anterior cingulate Sub-ဒေသများ ။ ရေတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျမ်းမျှ ဖြစ်. , အုပ်စုတစ်စုနည်းလမ်းများတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုတစ်ဦး 95% ယုံကြည်မှု Level ဖြင့် Fisher ကရဲ့ LSD စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အချက်များအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်နဲ့ Two-လမ်း ANOVA အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း Orexin အာရုံခံဆဲလျ activation
orexin အာရုံခံအတွက် cFos စကားရပ်များတွင်တစ်ဦးကသိသိသာသာတိုးသည့် PFA-ဇလဌာန (F ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်(5,31) ၆၃.၄; p <63.4; ပုံ 3a) နှင့် LHA (F ကို(5,31) ၆၃.၄; p <10.4; ပုံ 3b), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ။ အထူးနှစ်ဦးစလုံးလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကို (anestrous အမျိုးသမီး, estrous အမျိုးသမီးအနံ့မှထိတွေ့မှု, mounting ၏ Display, intromissions, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု) ပြသအထီးရှိသမျှတို့ကိုစမ်းသပ်အုပ်စုများနေအိမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ cFos ၏တန်းတူသော induction ပြသ စမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘဲ, LHA (60-80%) သာရှိပြီးပြည်ပမှသည့် PFA-ဇလဌာန (14-33%) အတွက် activated orexin ဆဲလ်တစ်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူလှောင်အိမ်ထိန်းချုပ်မှု။ ဤရလဒ်သည် orexin အာရုံခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစဉ်အတွင်းနောက်ထပ် activation မရှိဘဲစီးပွားရေးနှိုးဆွအမျိုးသမီးထိတွေ့အောက်ပါ activated ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် activation လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက် activation သွေးဆောင်နှစ်ဦးစလုံးသည် non-လက်ခံနှင့်လက်ခံအမျိုးသမီးအဖြစ်အမျိုးသမီးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏မက်လုံးပေး salience အပေါ်မှီခိုမဟုတ်ပါဘူး။
PFA-ဇလဌာန (က) နှင့် LHA (ခ) တွင် Orexin အာရုံခံရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူအားလုံး parameters များကိုအောက်ပါ cFos ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အတိုကောက်: HC, အိမ်လှောင်အိမ်; AF: anestrous အမျိုးသမီး; EF, estrous အမျိုးသမီး; M ကတောင်; IM, Intromission; အီး, သုက်။ ...
Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (အောင်းနေချိန် mount လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပံ့ပိုးမှု: F ကို(2,47) 3.962; p = 0.034; intromission အောင်းနေချိန်: H ကို = 9.104; p = 0.011) ။ ပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိရပါသည်အထီး (အောင်းနေချိန် mount အတုအယောင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုတောင်း mount မှ latency နှင့် intromission ပြသခဲ့သည်: p = 0.03; intromission အောင်းနေချိန်: p = 0.01; ပုံ 4a-ခ) နှင့် (အောင်းနေချိန် mount pre-ခွဲစိတ်မိတ်လိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း latency နှိုင်းယှဉ်: p = 0.02; intromission အောင်းနေချိန်: p = 0.03; ဒေတာများပြသထားမဟုတ်) ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးအတုအယောင်ယောက်ျားကနေသိသိသာသာကွာခြားမမအုပျစု pre-ခွဲစိတ်မိတ်လိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးထံမှကွဲပြားပါတယ်။ အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုမှာပြထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုတွေ (ရုံးတင်စစ်ဆေး4မဆိုကာလအတွင်းရှိခဲ့သည်အဖြစ်တောင်ပေါ်မှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် intromission latency ၏ဆိုးကျိုးများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ attenuated ခဲ့သည် ပုံ 4a-ခ) ။ သုတ်ရည်လွှတ် latency (ပုံ 4cတောင်ပေါ်၏), နံပါတ် (ပုံ 4d) နှင့် intromissions (ပုံ 4e) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှု (ပုံ 4f) သိသိသာသာစမ်းသပ်မှုတွေမဆိုစဉ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့် Pre-ခွဲစိတ်စမ်းသပ်အကြားတစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတစ်စုအတွင်းတွင်အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရုံးတင်စစ်ဆေး 1 စဉ်အတွင်းလိင်နုံယောက်ျားအတွက် mount နှင့် intromission မှ latency ကိုတိုစေ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက် Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, ရုံးတင်စစ်ဆေး4စဉ်အတွင်းအဖော်ရှာမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ (က) တောင်ပေါ်မှာ latency ။ (ခ) Intromission latency ။ (ဂ) သုက် ...
Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားတစ်ဖြောင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှုအတွက်အကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ခုစမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏သင်တန်းကျော်, ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု (p = 0.03 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဒုတိယစမ်းသပ်မှုတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးဆီသို့သိသိသာသာပိုမြန်ပွေးလေ၏ ပုံ 5) ။ ထိုသို့သောတိုးမြှင့်ပြေးအချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည် (လိုပက်ဇ် et al ။ , 1999) ။ ဒီအတုအယောင်အထီး (p = 2) တွင်အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ပျက်ကွက်ပေမယ့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတုအယောင်ယောက်ျားကိုလည်းရုံးတင်စစ်ဆေး 0.03 (p = 0.052) ကာလအတွင်းတစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးဆီသို့ပိုမိုမြန်ဆန်သို့ပွေးလေ၏။ အဆိုပါအုပ်စုများအဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်2စဉ်အတွင်းတစ် anestrous အမျိုးသမီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အထီးဆီသို့ဦးတည် run ဖို့တိုးမြှင့်မြန်နှုန်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ယေဘုယျလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခြင်းသရုပ်ပြ, ရုံးတင်စစ်ဆေး 1 မဟုတ်သလိုရုံးတင်စစ်ဆေး2မအပေါ်မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်ဆီသို့ဦးတည်ပြေးဖို့, အတုအယောင်အကြားမြန်နှုန်းအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်အထီးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်အတွေ့အကြုံကိုယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ပြသနှစ်မျိုးလုံးစမ်းသပ်မှုတွေ 1 နှင့်2စဉ်အတွင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးရောက်ရှိဖို့ကြိမ်ဖြစ်ကြ၏။ * နှိုင်းယှဉ်ရုံးတင်စစ်ဆေး2အတွက်အမျိုးသမီးရောက်ရှိရန်အချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးဆိုတာကိုပြသ ...
ရလဒ်များအရှင်ဝေးယောက်ျားတစ်ဦးဝတ္ထုအမျိုးသမီးကြုံတွေ့ရသည့်အခါကိုတွေ့ရှိရပါသည်အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှုကနေတဆင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်လွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထောက်ခံမှုများတွင်တွေ့ရှိရပါသည်အထီးတံခါးပိတ်လက်နက်အတွက်သုံးစွဲအချိန်တစ်လျော့နည်းသွားရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်မြင်ပြီ EPM, (p = 0.012 အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားပြသ; ပုံ 6) နှင့်ပွင့်လင်းလက်နက် (p = 0.023 အပေါ်အချိန်တစ်ခုတိုးလာရာခိုင်နှုန်း; ပုံ 6) အထီးအတုအယောင်နှိုင်းယှဉ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်မျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုထပ်မံကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်ကိုထောကျပံ့စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။
Orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဓါတ်လှေကားပေါင်းဝင်္အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါတံခါးပိတ်လက်နက်အတွက်သုံးစွဲအချိန်ရာခိုင်နှုန်း (လက်ဝဲ) lesioned ယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် (ညာ) ပွင့်လင်းလက်နက်အတွက်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်အချိန်ရာခိုင်နှုန်းခဲ့ကြသည်။ * သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ ...
endogenous orexin, orexin-innervated ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အာရုံခံ activation မှမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အဆိုပါ VTA အတွက် cFos စကားရပ်, NAc core နဲ့ shell ကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထောက်အကူပြုရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, mPOA နှင့် mPFC ကောက်ယူခဲ့သည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတုအယောင်ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, သိသိသာသာအဖော်ရှာ unmated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဦးနှောက်ဧရိယာအားလုံးအတွက် cFos တိုးလာ (စားပွဲတင် 2) ။ အတုအယောင်နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်တိရိစ္ဆာန်များအခြေခံသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်များတွင်ကွာခြားခဲ့ပါဘူးအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်, အာရုံကြော activation မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
တူညီသောတွေ့ရှိရပါသည်အဆင့်အတန်းကို non-မိတ်လိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်အတုအယောင်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်အုပ်စုများအတွက်သွေးဆောင် cFos အဖော်ရှာ။
ဒီလေ့လာမှုတွေကယောက်ျားကိုကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် endogenous orexin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒါဟာ orexin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမဟုတျကွောငျးတှေ့ရှိခဲ့သညျ။ အဲဒီအစား, orexin အာရုံခံယောက်ျားကိုအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းလွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြောင့် activated နေကြသည်။ ထိုမှတပါး, orexin ဆဲလ်-တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့် endogenous orexin ၏ဖယ်ရှားရေးစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင် facilitated ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို (arousal အတွက် orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့က de Lecea et al ။ , 2006; Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2006; Sakurai, 2007; Boutrel et al ။ , 2009; ဖာလုံနှင့် Carrive, 2009; ဖာလုံ et al ။ , 2009) နှင့်စိုးရိမ်စိတ် (ဆူဇူကီး et al ။ , 2005; Davis က et al, 2009; လီ et al ။ , 2010), ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် orexin များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောကျပံ့ပေးပါဘူး။
ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ရလဒ်များကိုနောက်ထပ် endogenous orexin နှင့် pharmacological tools တွေကိုသုံးပြီးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် orexin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ယခင်လေ့လာမှုများများ၏သရုပ်ခြားနားတွေ့ရှိချက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်း။ exogenous orexin-တစ်ဦး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် mPOA တာဟာ (orexin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ mPOA လုပျဆောငျစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, တိုးမြှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တိုးတက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှဦးဆောင်Gulia et al ။ , 2003) ။ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက် orexin-တစ်ဦး၏ ICV တာဟာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် arousal attenuatedBai et al ။ , 2009), တစ်ဦး orexin အဲဒီ receptor ရန်လိင်စိတ်နိုးထမသက်ရောက်ခဲ့စဉ် (Bai et al ။ , 2009), endogenous orexin ညွှန်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍမည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စနစ်တကျထိုးခြင်းဖြင့် ORX1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (သာအနည်းငယ် copulatory စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မှပြသခဲ့သည်et al Muschamp ။ , 2007) ။ ထိုအပဍိပက္ခလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အနည်းငယ်ကောက်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ exogenous orexin-တစ်ဦး၏လျှောက်လွှာအပြုအမူကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် ORX1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် endogenous orexin များအတွက်အသေးစားအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, အဓိကသက်ရောက်မှုမရှိBai et al ။ , 2009) ။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုထောကျပံ့။ orexin ဆဲလ်-တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့် orexin ၏ဖယ်ရှားရေး, အသုံးပြု. လက်ရှိလေ့လာမှုများ endogenous orexin နေဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ Bai et al (2009)။ ထို့ကြောင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရကြပေမည်, သို့သော်လေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှု၏မရှိခြင်းတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစွာရရှိခဲ့သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါရန်, အရေးကြီးပါသည် ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ။ အနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ဖွငျ့ဤအသိပေးချက်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
ဒါဟာနှစ်ခု orexin ligands နှင့် orexin receptors (ORX1 နှင့် ORX2 ၏နှစ်ခု Subtype ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်; Sakurai et al ။ , 1998) ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိစေနိုင်သည်။ orexin ဆဲလ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နည်းစနစ်အသုံးချဖို့အသုံးပြုပုံ orexin receptors (orexin-A နှင့် B) ၏နှစ်ဦးစလုံး Subtype များအတွက် ligands လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအဲဒီ receptor Subtype ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည် (Trivedi et al ။ , 1998; Marcus et al ။ , 2001) နှင့် differential cue သွေးဆောင်ကင်း-ရှာကြံ (အဘို့မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းညှိဖို့ပြသပြီSmith က et al ။ , 2009) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအဓိကအား orexin-A နှင့် ORX1 (အထကျဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ) ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အဓိကထားကြသည်။ လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော orexin အဲဒီ receptor ရန် SB334867 အရှင်ဝေးအထူးသ orexin-A နှင့် orexin-B က (အဘို့သိသိသာသာနိမ့်ဆှဖှေဲ့အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့သည့် ORX1 ပစ်မှတ်ထားSakurai et al ။ , 1998) ။ အလားတူပင် orexin-တစ်ဦးက (ယခင်လေ့လာမှုများအတွက် exogenous orexin အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်Gulia et al ။ , 2003; Bai et al ။ , 2009) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexin-B နဲ့ ORX2 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု orexin ၏ရေရှည်ဆုံးရှုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ et al Muschamp ။ (2007) သင်းအောက်ပါ orexin တစ်ရေရှည်လျှော့ချရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ orexin ဆဲလ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ် performance ကိုလျှော့ချမပြုခဲ့အတိုင်းဤအယူအဆသည်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြန်ဖြေတိုက်နယ်အတွင်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation မပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပေမယ့်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ရေရှည် orexin ဆုံးရှုံးမှု, အစားထိုးယန္တရားများအတွက်ရလဒ်ကြစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကလျှော့သို့မဟုတ် orexin မရှိခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားဆီးမဟုတျကွောငျးထငျရှားသညျ။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့် cFos ထုတ်ဖော်သော induction အတွက် orexin များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍထောကျပံ့ပေးပါဘူး။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်း (orexin အဆိုပါ VTA အတွက်အာရုံခံ၏ activation ကိုအထောက်အကူပြုရန်မြဲမြံစွာတည်ထားပြီးKorotkova et al ။ , 2003; Borgland et al ။ , 2006; နာရီတာ et al ။ , 2006; Vittoz et al ။ , 2008) ။ သို့သော်ဆဲလ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ VTA အတွက်, သို့မဟုတ်အခြားဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation ပိတ်ဆို့မပြုခဲ့ orexin အတုအယောင်ယောက်ျားအတွက် activated အာရုံခံနီးစပ်နီးကပ်အတွက် orexin-immunoreactive အမျှင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထို့ကြောင့်ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation orexin အရေးယူမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။
လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ဦးကအတန်ငယ်မျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်တော့မှားမယ်, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံရှိမဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်များ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်လျော့ချရေးဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ arousal အပေါ်သက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းဖြစ်နိုင်သည်။ orexin-တစ်ဦး၏ ICV ပြုတ်ရည်ကြွက်များတွင် EPM များ၏ပွင့်လင်းလက်နက်အပေါ်အချိန်လျော့နည်းသွားအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ယခင်လေ့လာမှုများ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအတွက် orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခဲ့ကြဆူဇူကီး et al ။ , 2005) ။ အထီးကြွက်များ၏ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ orexin-တစ်ဦး၏ပြုတ်ရည်တစ်ပွင့်လင်းသောလယ်အခန်းထဲက၏ဗဟိုဧရိယာ၌သုံးစွဲအချိန်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် orexin စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏မျိုးဆက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါညွှန်း, ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုတူးဖော်ရေးလျော့နည်းသွား (လီ et al ။ , 2010) ။ ထို့အပြင် EPM အပေါ်ယူပြီးတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုပြသသောကြီးစိုးအထီးကြွက်များကို (mPFC အတွက် ORX1 mRNA ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြDavis က et al ။ , 2009) ။ Orexin လည်း (စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပြသထားသည်Ida et al ။ , 1999; Ida et al ။ , 2000), နှင့် orexin receptors ၏ဆွ (အချက်လွှတ် corticotrophin ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးal-Barazanji et al ။ , 2001; Singareddy et al ။ , 2006), corticosterone (Ida et al ။ , 2000; Kuru et al ။ , 2000) နှင့် adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (Kuru et al ။ , 2000) ။ Orexin ရန် (အိပ်မပျော်၏ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်လက်ရှိမကြာခဏစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူ comorbid သောရောဂါများမှာလီဗန်နှင့် Neria, 2009), နှင့်က orexin ရန်အလားအလာစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းတွေးဆနေပါတယ် (Mathew et al ။ , 2008) ။ စိုးရိမ်စိတ်အတွက် orexin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏သက်သေသာဓကများကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ပေးထားသောကြောင့် orexin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တစ်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏နိဒါန်းနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နုံယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါပုံပေါ် arousal, အမျိုးသမီး ie ။
orexin အာရုံခံ၏သိသာထင်ရှားသော activation အသီးသီး 60-80% နှင့်တကွ, PFA-ဇလဌာနနှင့် LHA နှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးလိင်နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါမြင် cFos ဖော်ပြ orexin ဆဲလ် 14-33% ခဲ့သည်။ အဆိုပါ orexin ဆဲလ်လူဦးရေအတွင်း orexin အာရုံခံ function ကိုတစ်ဦး dichotomy ထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ကို (PFA-ဇလဌာန arousal အတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် LHA ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေများအတွက်အရေးပါဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူရှိပါသည်Harris က et al ။ , 2005; Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2006, Aston-ဂျုံးစ်, 2009a) ။ ဒါကွောငျ့အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် PFA-ဇလဌာန orexin ဆဲလ် activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက် arousal နှင့်နုံယောက်ျားအတွက်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်အပါအဝင် orexin အားဖြင့် activated နှင့် arousal ဘို့အရေးကြီးသည်သောအယူအဆ, ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော် PFA-ဇလဌာနဆဲလ် PFA-ဇလဌာနဆဲလ်ယေဘုယျ arousal စဉ်နှင့်မရအထူးလိင်စိတ်နိုးထနေဖြင့် activated ခဲ့အကြံပြုခြင်း, ယောက်ျား၏အတွေ့အကြုံနှင့်အမျိုးသမီး၏ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းလွတ်လပ်သောအလားတူအဆင့်ဆင့်မှ activated ခဲ့ကြသည်။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါငျးတို့သ parameters တွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက် LHA ၏သိသာထင်ရှားသော activation ရှိခဲ့သည်အဖြစ်ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများအပြည့်အဝမသက်ဆိုင်သည့်အပြုအမူဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ၏တစ်ဦးလုံးဝ dichotomous orexin ဆဲလ်လူဦးရေရဲ့တည်ရှိမှုကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး anestrous အမျိုးသမီးထိတွေ့အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ်မှ copulated ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ LHA အတွက် orexin ဆဲလ် activation ၏တန်းတူအဆင့်ဆင့်ပြသသည်။ သို့သျောလညျးကိုသာအဆုံးစွန်သောအုပ်စုတစု (မိတ်လိုက်များအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းစေမည်Tenk et al, 2009); သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိအကြံပြုခြင်းမိတ်လိုက်၏အခြားဒြပ်စင်ထက်ပိုပြီးကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက် orexin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစမ်းသပ်ဘဲ, ဤအရပ်မှအနာဂတ်လေ့လာမှုများထိုမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။
အချုပ်အားဤလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို orexin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါမဟုတ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအစား, orexin ဆဲလ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် endogenous orexin စိုးရိမ်စိတ်တိုးမြှင့်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု, စိုးရိမ်စိတ်လျှော့ချရန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, orexin ၏ဖယ်ရှားရေး endogenous orexin ဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးသမီးဆိုလိုသည်မှာဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်စိုးရိမ်စိတ်တိုးပွားလာအသုံးပြုပုံမိတ်လိုက်၏စတင်တားစီးစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်များ၏ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြော circuitry elucidate နှင့် arousal နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက် orexin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်စာပေ၏ကြီးထွားလာသောခန္ဓာကိုယ်မှထည့်ပါ။
ဒါဟာသုတေသနကျန်းမာရေးသုတေသန (RN 01) ၏ကနေဒါ Institutes နှင့်အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်ကနေဒါ၏အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီ (Discovery Grant က (014591) LMC ရန်, ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ (R014705 DA341710) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
al-Barazanji Ka, Wilson က S နဲ့, Baker J ကို, Jessop DS, Harbuz က MS ။ ဗဟို orexin-တစ်ဦးက hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သတိကြွက်များတွင်အာရုံခံ vasopressin အချက်နှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ထွက်ရှိ hypothalamic corticotropin လှုံ့ဆော်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2001; 13: 421-424 ။ [PubMed]
Aston-ဂျုံးစ်, G, စမစ် RJ, Moorman DE, ရစ်ချတ်ဆန် Ka ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စွဲလမ်းအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံ၏အခန်းက္ပ။ Neuropharmacology ။ 2009a; 56 ပျော့ပျောင်း 1: 112-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Aston-ဂျုံးစ်, G, စမစ် RJ, Sartor GC, Moorman DE, Massi L ကို, Tahsili-Fahadan P ကိုရစ်ချတ်ဆင် Ka ။ lateral hypothalamic orexin / hypocretin အာရုံခံ: ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်းတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 2009b; 1314: 74-90 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bai YJ လီ YH, Zheng XG, ဟန်ဂျေယန် XY, Sui ကို N. Orexin တစ်ဦးကအထီးကြွက်များတွင်ခြွင်းချက်မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု attenuates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009; 91: 581-589 ။ [PubMed]
Bäckberg M က, Hervieu, G, Wilson က S က, အ hypothalamus ၏ဓာတုဗေဒဖော်ထုတ်အာရုံခံအတွက် Meister ခ Orexin အဲဒီ receptor-1 (နွားကို-R1) immunoreactivity: အစားအစာနှင့်ရေစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက် orexin ပစ်မှတ်အပေါ်အာရုံစိုက်။ EUR ဂျေ neuroscience ။ 2002; 15: 315-328 ။ [PubMed]
Baldo BA ဘွဲ့, ဒံယေလ RA, Berridge CW, ကယ်လီ AE ။ orexin / hypocretin- နှင့် arousal, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဖိစီးမှုကိုဖြန်ဖြေကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine-beta-hydroxylase immunoreactive အမျှင်များထပ်ဖြန့်ဝေ။ J ကို comp Neurol ။ 2003; 464: 220-237 ။ [PubMed]
Benoit SC, Tracy AL, Davis က JF, Choi: D, Clegg DJ သမား။ orexigenic hypothalamic peptides ၏ဝတ္ထုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: မျိုးဗီဇကနေအမူအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရ။ 2008; 24: 843-847 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Borgland SL, Taha SASF, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 49 (4): 589-601 ။ [PubMed]
Boutrel B, Cannella N က, က de Lecea အယ်လ် arousal နှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေကိုကားမောင်းအတွက် hypocretin ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Boutrel B, Kenny PJ, Specio SE, မာတင်-Fardon R ကို, Markou တစ်ဦးက, Koob gf, ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin ဘို့က de Lecea အယ်လ်အခန်းက္ပ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2005; 102: 19168-19173 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဆိုပါ neuropeptide မှကြားဆက်ဆံရေး Y နှင့် agouti ဗီဇ-related ပရိုတိန်းစနစ်များ: Broberger ကို C, De Lecea L ကို, Sutcliffe JG, orexin- Hokfelt တီ Hypocretin / နှင့် melanin-အာရုံဟော်မုန်း-ဖော်ပြဆဲလ်ကြွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်ကွဲပြားလူဦးရေဖွဲ့စည်းရန်။ J ကို comp Neurol ။ 1998; 402: 460-474 ။ [PubMed]
Carter က ME, Borg JS, က de Lecea အယ်လ်ဦးနှောက် hypocretins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors: allostatic arousal ၏ပြုပြီ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2009; 9: 39-45 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chemelli RM, ဝီလီ JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T ကလီကို C ရစ်ချတ်ဆင်ဂျာ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေအတွက်ဝီလျံ SC, Xiong Y ကို, Kisanuki Y ကို, Fitch TE, Nakazato M က, Hammer RE, Saper သမဝါယမ, Yanagisawa အမ် Narcolepsy : အိပ်စက်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ cell ။ 1999; 98: 437-451 ။ [PubMed]
ချန်မှန် CT, ဒွန်း SL, Kwok Eh, ဒွန်း NJ, Chang-JK ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Orexin တစ်ဦးကဲ့သို့ immunoreactivity ။ neuroscience လက်တ။ 1999; 260: 161-164 ။ [PubMed]
Choi DL, Davis က JF, Fitzgerald ME, Benoit SC ။ အစားအစာကိုလှုံ့ဆျောမှု, ဆုလာဘ်-based နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက်အစားအစာ-သွေးဆောင်အာရုံခံ activation အတွက် orexin-တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ။ 2010; 167: 11-20 ။ [PubMed]
Davis က JF, Krause ဥပမာ Melhorn SJ, Sakai က RR, Benoit SC ။ လွှမ်းမိုးကြွက်ကသဘာဝအန္တရာယ် takers ဖြစ်ကြပြီးအစာအာဟာရအကျိုးသည်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုဖော်ပြရန်။ neuroscience ။ 2009; 162: 23-30 ။ [PubMed]
hypothalamic peptides ၏အခြားရွေးချယ်စရာအခန်းကဏ္ဍ: Lecea L ကို, ဂျုံးစ်က de, Boutrel B, Borgland SL, Nishino က S, Bubser M က, DiLeone R. စွဲနှင့် arousal BE ။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26 (41): 10372-10375 ။ [PubMed]
က de Lecea L ကို, Kilduff TS, Peyron ကို C, Gao X ကို, Foye PE, Danielson PE, Fukuhara ကို C, Battenberg EL, Gautvik VT, Bartlett FS, 2nd, Frankel WN, ဗန်တွင်း Pol AN, Bloom FE, Gautvik KM, Sutcliffe JG ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998; 95: 322-327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dewsbury DA ။ ကြွက်၏ Copulatory အပြုအမူ (Rattus norvegicus) ကြိုတင် copulatory အတွေ့အကြုံကိုတစ် function ကိုအဖြစ်။ Animation ပြုမူနေ။ 1969; 17: 217-223 ။ [PubMed]
Fadel J ကို, Deutch AY ။ orexin-dopamine interaction က၏ခန္ဓာဗေဒအလွှာ: အ ventral tegmental ဧရိယာမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2002; 111: 379-387 ။ [PubMed]
ဖရက်ဒရစ်-Duus: D, Guyton MF, cortical acetylcholine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Fadel ဂျေအစားအစာရူးနှမ်းတိုး orexin ဂီယာလိုအပ်သည်။ neuroscience ။ 2007; 149: 499-507 ။ [PubMed]
ဖာလုံ TM, အ perifornical hypothalamus အပေါ်ဗဟိုပြု Carrive P. Neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အခြေအနေတွင်မှသော်လည်းမထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏အခွအေနေကိုကွောကျရှံ့၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုဖျက်ပယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 1128: 107-119 ။ [PubMed]
ဖာလုံ TM, Vianna DM, လျူ L ကို, Carrive P. Hypocretin / orexin တချို့၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် arousal မပုံစံအားလုံးကိုစတေယျ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 8: 1603-1614 ။ [PubMed]
Gerashchenko: D, Kohl MD, ဂရိ M က, Waleh NS, ဆား-Pascual R ကို, Kilduff TS, Lappi DA, Shiromani PJ ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ၏ Hypocretin-2-saporin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင် narcoleptic တူသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူထုတ်လုပ်ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 7273-7283 ။ [PubMed]
Gulia KK, Mallick HN, Kumar က VM က။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာမှာ Orexin တစ်ဦးက (hypocretin-1) လျှောက်လွှာကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ potentiates ။ neuroscience ။ 2003; 116: 921-923 ။ [PubMed]
Hagan JJ, Leslie RA, Patel က S နဲ့, အီဗန် ML, Wattam က TA, Holmes က S, Benham CD ကို, တေလာစင်ကာပူဒေါ်လာ, Routledge, C, Hemmati P ကို, Munton RP, Ashmeade TE, Shah က AS, Hatcher JP, Hatcher PD, ဂျုံးစ် DN, Smith က MI , Piper, DC, Hunter AJ, Porter RA, Upton N. Orexin တစ်ဦးက locus coeruleus ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် arousal တိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 10911-10916 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437 (7058): 556-559 ။ [PubMed]
Horvath TL, Peyron ကို C, Diano S က, Ivanov တစ်ဦးက, Aston-ဂျုံးစ်, G, Kilduff TS, ဗန် Den Pol AN ။ Hypocretin (orexin) activation နှင့် locus coeruleus noradrenergic စနစ်၏ Synaptic innervation ။ J ကို comp Neurol ။ 1999; 415: 145-159 ။ [PubMed]
Ida T က, Nakahara K ကို Katayama T က, Murakami N ကို, အစာစားချင်စိတ်ကို-လှုံ့ဆော် neuropeptide, orexin နှင့် neuropeptide Y ကို၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် cerebroventricular ဆေးထိုး၏ Nakazato အမ် Effect, ကြွက်များ၏အမျိုးမျိုးသောအမူအကျင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 821: 526-529 ။ [PubMed]
Ida T က, Nakahara K ကို Murakami T က, Hanada R ကို, Nakazato M က, ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် orexin ၏ Murakami N. ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 2000; 270: 318-323 ။ [PubMed]
Korotkova TM, Sergeeva oa, Eriksson KS, Haas HL, Brown က RE ။ orexins / hypocretins အားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic နှင့် nondopaminergic အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (1): 7-11 ။ [PubMed]
Kuru M က, Ueta Y ကို, Serino R ကို, Nakazato M က, Yamamoto Y ကို, ရှိဘုယ, ငါသည် Yamashita အိပ်ချ်ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin / hypocretin ကြွက်များတွင် HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuroreport ။ 2000; 11: 1977-1980 ။ [PubMed]
လီ Y ကိုလီက S, ဝေကို C, ဝမ် H ကို, Sui ကို N ကို, Kirouac GJ ။ အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် microinjections orexin ထုတ်လုပ်စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2010; 95: 121-128 ။ [PubMed]
Lin က L ကို, Faraco J ကိုလီ R ကို, Kadotani H ကို, ရော်ဂျာ W က, Lin က X ကို, Qiu X ကို, de Jong က PJ, Nishino က S, Mignot အီးအဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းရောဂါခွေးတစ်ကောင် narcolepsy အဆိုပါ hypocretin အတွက် mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် (orexin) အဲဒီ receptor2ဗီဇ ။ cell ။ 1999; 98: 365-376 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်နာရီ, Olster DH, ယောက်ျားကြွက်များတွင် Ettenberg အေလိင်လှုံ့ဆျောမှု: မူလတန်းမက်လုံးပေးခြင်းနှင့် copulatory အတွေ့အကြုံကို၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1999; 36: 176-185 ။ [PubMed]
Marcus ဖြစ်မှု, Aschkenasi CJ, Lee ကအီး, Chemelli RM, Saper သမဝါယမ, Yanagisawa က M, Elmquist JK ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏ differential စကားရပ်။ J ကို comp Neurol ။ 2001; 435: 6-25 ။ [PubMed]
မာတင်, G, Fabre V ကို, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် neurotransmitters အတူ hypocretins ၏က de Lecea အယ်လ် Interaction ။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2002; 104: 111-117 ။ [PubMed]
Mathew SJ, စျေး RB, Charney DS ။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏ neurobiology တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေ: ဝတ္ထုဟော်မုန်းအဘို့အဂယက်ရိုက်။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇကို C seminal Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2008; 148C: 89-98 ။ [PubMed]
JW, Dominguez JM, Sato သည် SM, Shen RY, Hull က EM Muschamp ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် hypocretin တစ်အခန်းကဏ္ဍ (orexin) ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2837-2845 ။ [PubMed]
Nair စင်ကာပူဒေါ်လာ, ရွှေလုပ် SA, High-အဆီအစားအစာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအစားအစာ reinstatement အပေါ် hypocretin 1 အဲဒီ receptor ရန် SB 334867 ၏ Shaham Y. Differential ဆိုးကျိုးများ။ br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154: 406-416 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, Khotib J ကို, Miyatake M က, Sakurai T က, Yanagisawa က M, Nakamachi T က, Shioda S ကိုမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များဆူဇူကီးတီတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 398-405 ။ [PubMed]
လူ့ narcolepsy အတွက် Nishino က S, Ripley B, Overeem S က, Lammers GJ, Mignot အီး Hypocretin (orexin) ချို့တဲ့ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2000; 355: 39-40 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Stereotaxic Coordinates အတွက် Watson ဟာ C. အဆိုပါ Rat ဦးနှောက်။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
Peyron ကို C, Faraco J ကို, ရော်ဂျာ W က, Ripley B, Overeem S က, Charnay Y ကို, Nevsimalova S က, Aldrich M က, Reynolds က D:, Albin R ကိုလီ R ကို, Hung က M, Pedrazzoli M က, Padigaru M က, Kucherlapati M က, ဝါသနာရှင် J ကို, ဂွေ ​​R ကို , Lammers GJ, Bouras ကို C, Kucherlapati R ကို, Nishino က S, Mignot အီးအစောပိုင်းစတင်ခြင်း narcolepsy တစ်ဦးအမှု၌တစ်ဦးက mutation နှင့်လူ့ narcoleptic ဦးနှောက်ထဲမှာ hypocretin peptides တစ် generalized မရှိခြင်း။ နတ် Med ။ 2000; 6: 991-997 ။ [PubMed]
အပြုအမူနှင့်စွမ်းအင် homeostasis နို့တိုက်ကျွေးမှု၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းထဲမှာ orexins နှင့် orexin receptors ၏ Sakurai တီအခန်းကဏ္ဍ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2006; 5: 313-325 ။ [PubMed]
Sakurai တီ orexin များ၏အာရုံကြောဆားကစ် (hypocretin): ထိန်းသိမ်းခြင်းအိပ်စက်ခြင်းမနိုး။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8: 171-181 ။ [PubMed]
Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, Williams က SC, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျာ Kozlowski မိသားစုဆရာဝန်, Wilson က S နဲ့, Arch JR, ဘာကင်ဟမ် RE, ဟေး AC အ, Carr က SA, Annan RS, McNulty DE, လျူ WS , Terrett ဂျာ Elshourbagy NA, Bergsma DJ သမား, Yanagisawa အမ် Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell ။ 1998; 92: 573-585 ။ [PubMed]
Satoh S က, Matsumura H ကို, Fujioka တစ်ဦးက, Nakajima T က, Kanbayashi T က, Nishino က S, Shigeyoshi Y ကို, orexin အာရုံခံအတွက် Yoneda အိပ်ချ် FOS စကားရပ် preoptic ဧရိယာ၏ muscimol perfusion အောက်ပါ။ Neuroreport ။ 2004; 15: 1127-1131 ။ [PubMed]
Siegel JM ။ Narcolepsy: hypocretins (orexins) ဆဲလ်များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ 1999; 98: 409-412 ။ [PubMed]
Singareddy R ကို, Uhde T က, ဆူညံသံ-တစ်ဦးတည်းအလားအလာထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်အပေါ် hypocretins ၏ Commissaris R. Differential ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2006; 89: 650-655 ။ [PubMed]
အဆိုပါ orexin 1 အဲဒီ receptor မှာအချက်ပြ Smith က RJ, ကြည့်ရှု RE, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Orexin / hypocretin cue-ရူးနှမ်းကိုကင်း-ရှာထိန်းညှိ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 30: 493-503 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရှောလမုန်သည်တစ်ဦးက, De Fanti အဘိဓါန် BA, Martinez ဂျေအေ။ Peripheral ghrelin glucostatic အချက်ပြအတွက် orexin အာရုံခံတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2007; 144: 17-24 ။ [PubMed]
Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် Sullivan က GM က, Neria Y. Pharmacotherapy: randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေကနေသက်သေအထောက်အထား။ Curr Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2009; 10: 35-45 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆူဇူကီးက M, Beuckmann မှန် CT, Shikata K ကို Ogura H ကို, Sawai တီ Orexin-တစ်ဦးက (hypocretin-1) စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏မျိုးဆက်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2005; 1044: 116-121 ။ [PubMed]
Thannickal TC, Moore က RY, Nienhuis R ကို, Ramanathan L ကို, Gulyani S က, Aldrich M က, Cornford M က, Siegel JM ။ လူ့ narcolepsy အတွက် hypocretin အာရုံခံအရေအတွက်လျှော့ချ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 27: 469-474 ။ [PubMed]
Thorpe AJ, Cleary JP, Levine AS, Kotz CM ။ ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin တစ်ဦးကကြွက်များအတွက်ချိုမြိန်လုံးလေးများများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 182: 75-83 ။ [PubMed]
Trivedi P ကို, ယု H ကို, MacNeil DJ သမား, ဗန် der Ploeg LH, ဂွမ် XM ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အဲဒီ receptor mRNA ၏ဖြန့်ဝေ။ FEBS လက်တ။ 1998; 438: 71-75 ။ [PubMed]
Vittoz မိုင်, Schmeichel ကကာကွယ်နိုင်ခ, Berridge CW ။ Hypocretin / orexin ဦးစား caudomedial ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 1629-1640 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volgin DV, Swan J ကိုစူးရှသော၏ Kubin အယ်လ်လူပျိုဆဲလ် RT ကို-PCR ဗီဇစကားရပ်ကို။ dissociated နှင့် immunocytochemically အလယ်ပိုင်းတွင် neuron ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဂျေ neuroscience နည်းလမ်းများ။ 2004; 136: 229-236 ။ [PubMed]